Ogaden News Agency (ONA) – Mid kamida Gacanku dhiiglayashi Dilay Nasri oo Poliska South Afrika qabtay
Mid kamida Gacanku dhiiglayashi Dilay Nasri oo Poliska South Afrika qabtay
Posted by ONA Admin	/ October 5, 2012
Sida ay cadeeyeen poliska magaalada Uitenhage ee wadanka South Afrika waxay gacanta ku dhigeen nin kamid ah dadkii dilay gabadh kasoo jeeday dhulka Ogadeniya Nasri oo lagu dilay South Afrika. Marxuumada allaah ha u naxariiste waxaa bishii hore lagu dilay magaalada Uitenhage.
Gacan ku dhiiglaha ayaa qirtay sida la sheegay isaga oo laga helay teleefankii marxuumada iyo alaabo kaleba Waxaana la horkeeni doona maxkamad.
Poliska ayaa kudaba jira sidii ay ku heli lahaayeen dadkii kalle ee dilkaas ka qeyb qaatay.
Danbilaha ayaa maxkamada magaalada Uitenhage lakeeni doona maalinta isniinta ah ee 08/10/12 aroortii.
Ruux kasta oo doonaya in uu yimaado goobtaas waa in uu xili kahor yimaadaa xaafiiska jaaliyada ogaadeeniya ee koonfur afrika.
Waxaa lagu wargalinayaa dhamaan soomaalida kunool P.E iyo nawaxigeeda in ay muujiyaan shucuurta ku aadan dilkii foosha xumaa ee loo gaystay Marwo Nasri Allah ha u naxariistee xili ay jiiftay gurigeeda
Poliska ayaa dadaal dheeraad ah wada si ay kiiska meel cad u saaraan kadib markii saxaafada laga sheegay in aysan waxba qaban doonin hadaba soomaalida waxaa la gudboon in ay si buuxda u garab istaagaan kiiskaas si uu tusaale ugu noqdo kuwa danbe.